Leego: Alshabaab oo si gaadmo u weeraray AMISOM – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in maanta Alshabaab weerar gaadmo ah ku qaadeen ciidan ka tirsan kuwa AMISOM oo marayey meel ku dhow deegaanka Leego.
Gaadiidka AMISOM ee la weeraray ayaa la sheegay iney ahaayeen 5 gaari oo nuuca qanfilan ah, waxaana Alshabaab sheegteen iney gubeen 2 la mid ah, islamarkaana ay dileen dhowr askari.
Alshabaab ayaa sidoo kale sheegay iney dagaalka ku qabsadeen dhowr qori, inkastoo wararkaas aan laga xaqiijin ilo madax banaan.
Markii weerarkaasi dhacay waxaa deegaanka gaaray ciidamo fara badan oo lugeynaya, waxaana wali jirin wax war ah oo ka soo baxay Taliska AMISOM oo ku aadan weerarkan ay Al-Shabaab sheegatay in khasaare xoog leh ku gaarsiisay.
Weerarkan ayaa saameyn ku yeeshay dhaq dhaqaaqa gaadiidka ee wadada isku xirta Muqdisho ilaa Baydhabo, iyadoo ay xayirmeen gaadiid ka kala baxay labada magaalo.